Resaky ny mpitsimpona akotry : rivotra mandalo | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : rivotra mandalo
Samy mahafantatra ny fitsokan’ny rivotra eo Ankadilalana. Mahazatra izany, efa ela anie izay nandiavana ity lalana anaty hady izorana ity, efa masaka ny arabe izay mihalalina hatrany noho ny fikaohan’ny riakan’ny fahasahiranana azy, ny vahoaka zara raha tsy efa mandady mitety ny rihitra efa an-dohalika. Tadio kely manditsoka mandalo fotsiny ity disadisa mikasika ny fifidianana senatera ity, tsy manaitra ny mponina, aiza ho aiza ny rivodoza efa nozakaina izany, hany atao mahazendana angamba dia ny maha faona ny fanantenana napetraka momba ny fiovana, izany no ambaran’io rivodrivotra io. Ny tranga omaly ihany no miverimberina, ny toetsaina tsy niova, ny toerana no ifandimbidimbiasan-dry zalahy. Ny adiady ifanaovan’ izy ireo aza no mitora-jofo kokoa matetitetika, manainga vovoka mahajambena sy manempotra ny vahoaka.
Izany no mahatonga ny mponina hitaky olom-baovao eo amin’ny sehatra fanaovana pôlitika. Efa nisy anefa ny zazavao na omaly na ankehitriny, fa ny fomba fanao ihany no tazana avadibadika dia ny filalaovana pôlitika ho fomba fikarohana tombontsoa manokana ao anaty saritaka ka tsy maintsy samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Amin’izany fikarohana mamy sy matsiro izany, tsy ny fifaninanana
amin’ny any ivelany ihany no imasoana fa na ireo mpiara-mitolona aza dia mifampiahiahy misoko mangina ny ady an-trano mifandrafy mihitsy amin’ny fahazoana toerana amorom-patana. Toy ny ady totohondry ambony sehatra izy ity, nandresy teo amin’ny fidirana voalohany ny HVM, raikitra mangina any ambadika any ny fidirana faharoa, tsy ambony lapihazo intsony hany ka samy mampiasa ny fomba fahaizany tsy misy mpitsara, na fahaizana feno hafetsifetsena izany na fahaizana mamingana. Fahazoana toeram-boninahitra feno tantely no ifaninanana tsy mahagaga raha miteraka fifandrafesana. Izany hoe iza no eo ankavanan’ny tompo! Mitana ny laharana faharoa na fahatelo eto amin’ny Repoblika ny Filohan’ny Antenimierandoholna. Tsy tongatonga ho azy amin’izany raha tsy manana fahaizana milomano amin’izao karazana rano samihafa izao, ao ny rano madio ao koa ny mivadi-potaka. Hany hevitra manjaka amin’ny safidy mikasika izany dia ny fitsijonvana ny tombontsoan’ny antoko mpandresy, nandresy omaly tsy ho vakivaky mitondra fery hitarika faharesena rahampitso.